Xogta-Xogdoon: qorshe ka dhan ah Kenya oo laga abaabulayo Villa Somalia | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Xogta-Xogdoon: qorshe ka dhan ah Kenya oo laga abaabulayo Villa Somalia
Xogta-Xogdoon: qorshe ka dhan ah Kenya oo laga abaabulayo Villa Somalia
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay ka jawaabto go’aankii ay Kenya ku jebisay xayiraaddii duulimaadka ee saarneyd magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka Jubada Hoose.
Mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka oo maalmahan ka shirsanaa sida looga jawaabayo dhaq dhaqaaqyada siyaasadeed ee Kenya ay qaadeyso ayaa warbixin dhammeystiran la wadaagay madaxweynaha Soomaaliya iyo Ra’iisal wasaaraha si ay go’aan kama dambeys ah u qaataan.
Warar aan ka helnay xubno lagu kalsoon yahay oo ku sugan Villa Somalia ayaa sheegaya in dowladda ay ka fakareyso laba qodob midkood oo kala ah, in dalka laga eryo safiirka Kenya, ama in la joojiyo qaadka soo gala dalka, si looga jaaabo xadgudubyada dowladda Kenya.
“Xukuumaddu waxay dhowaan eryi doonaa safiirka Kenya ama joojiin doontaa qaadka dalka soo gala ee ka yimaada Kenya si looga jawaabo xadgudubyadii dhacay ee dhanka duulimaadka ah” ayuu yiri qof ka tirsan Villa Somalia oo aan la hadalnay.
Illaa hadda ma cadda midka ay qaadan doonto dowladda labada go’aan. Waxaa sidoo kale macquul ah in dowladda aysan labada tallaabo midkood qaadin, ayna dacwad caalami ah oo ka dhan ah Kenya u gudbiso Midowga Afrika iyo QM.
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maalin kadib markii ay mamnuucday duulimaadka Kismaayo iyo Nairobi ayaa amarkaas waxaa jebiyay dowladda Kenya kadib markii wafdi sare oo ka socda dalkaasi ay ka qayb galeen caleema saarka Axmed Madoobe.
Previous articleAxmed Madoobe oo ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah Al-Shabaab
Next articleAkhriso fariinta Madaxweyne Farmaajo laba Sano kadib qarixii Soobe?